Ukuchayeka kwekhaya le-NJ kusithinta kanjani isikweletu sakho? - I-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye nabameli Bokuqothuka
Ikhaya / Blog / Ukuqothuka / Ukuchayeka kwekhaya le-NJ kusithinta kanjani isikweletu sakho?
Abantu abaningi babuza ukuthi ukungazivezi kuthinta kanjani isikweletu sakhe. Babuye babuze ukuthi ukuqothuka kuwathinta kanjani amaphuzu wesikweletu. Zombili lezi zimo zinemithelela ehlukile kokungaphezulu kwesikweletu sakho. Ukucabangisisa ngezinketho zakho nokuthintekayo kungakusiza unqume ukuthi uluphi uhlobo lwecebo ofuna ukulenza.
Ukudalulwa Kwethonya Ngekusasa Lakho
Ukubolekwa kwahlanganiswa idatha kubantu abaningi ababembone ngaphambili kanye nezinto ezithinta abazibonayo. I-Leing Tree ibike ukuthi, "E-2018, bekunamakhaya angaphezu kwe-600,000 abonakele e-US Lesi yisimo esiphansi kakhulu kunesikhathi sezinkinga zezimali lapho ukubikezelwa kwehla cishe ngezigidi ze-2.9 e-2010. Yikuphi okupenda isithombe esihle kunabantu abaningi baseNew Jersey obebhekene cishe ne-1% yawo wonke amakhaya e-NJ endaweni ethile yokubonakaliswa futhi namanje i-10 ephezulu ithi yenombolo yokubikezela.
“Ukutholwa kokhiye” kweLindTree akumangazi. Izikolo ezikweletwayo ngokwesilinganiso zithathe idiphu enkulu ezimweni eziningi (amaphuzu we-150 +), bese iqala ukuthuthuka ngokuhamba kwesikhathi. Ngokombono wami siqu inkampani yami ibilokhu inamakhasimende ekubonakalweni ukuthi ngoba bebengekho kwimpahla ebanjwayo ayithintwanga yimidwebo yokwembulwa kwangempela, kanti kwezinye izikhathi amaklayenti ahlukile abebuyela ngemuva ekukhokheleni ezinye izikweletu ezibe nomthelela ezikolo zabo zesikweletu. Ngakho-ke, okulindelwe ukuthi uma uphuthelwa yizinkokhelo zakho ukuthi ngabe inkokhelo yempahla ebanjiswayo noma ikhadi lokuthenga ngesikweletu ikhadi lakho lesikweletu lizokwehla, bese ululama uma usebenzisa isikweletu sakho ngobuhlakani.
Ukudalulwa ngokuyisisekelo ngeke kuze kuchithe isikweletu sakho kuze kube manje futhi ekugcineni kuzolahla umbiko wakho wesikweletu ngemuva kweminyaka engu-7. Sinikeza uhlelo olubizwa I-7 inyathela isikweletu se-720 esiza abantu ukuthi bakhe kabusha isikweletu sabo ngokushesha ngokuchaza ukuthi zingaki izinhlelo zokubika izikweletu ezisebenza.
Imiphumela Yokuqothuka Kwikusasa Lakho
Ukuqothuka kuvame ukwenza ngendlela efanayo nokuvezwa kwirekhodi lomuntu othile, kepha esimweni se-7 ku-akhawunti yakho yesikweletu kuzofakwa kumbiko wesikweletu weminyaka ye-10. Futhi, lapho futhi, kungenzeka ukwakha kabusha isikweletu somuntu ngemuva kokuqothuka kungakapheli iminyaka ye-2 kusukela ngesikhathi sokuqothuka.
Ukuqothuka kusebenza egameni le-filer kanti ukubikezela kuqala akuyona into embi kwaphela. Ukuqothuka kusula izikweletu futhi kwenza kube lula ukuthi umuntu akhokhe izikweletu ezizayo. Ngokuyisisekelo ukusetha kabusha kwezezimali okuvumela umuntu ukuthi asethe kabusha imali yakhe ukwenza lula ukuqhubekela phambili.
Sinikeza ngezibonelo zezikweletu zangempela zamakhasimende ezibikezelwe (Yonke imininingwane yokuhlonza umuntu isusiwe ngenxa yobumfihlo.) Kithi I-7 inyathela isikweletu se-720 Uhlelo lwamakhasimende esibe nalo nokuthi iziphi izikali ezizobikezela unyaka owodwa ngemuva kokuqothuka.
Umphumela Wesikweletu Esiphansi = Amanani aphezulu wenzalo
Umbiko wereferensi weLingTree wangaphambilini ukhombisile ukuthi ababolekisi abanophawu lwesikweletu ngaphezulu kwe-740 kanye nembonakalo yangesikhathi esedlule eminyakeni emibili edlule bakhokha isilinganiso esiphakeme sesilinganiso esingu-5.02% uma kuqhathaniswa nalabo abangakaze babonakale ngaphambili noma ukubekwa phambili kwakungekho eminyakeni eyisikhombisa edlule Amaphesenti we-4.7.
Ngakho-ke ngisho nabantu abanesikweletu esikhulu baqhubeka bezilimaza ngokuba nembali kwirekhodi labo. Imalimboleko engu- $ 500,000 ine- $ 1600 ngentshisakalo eyengeziwe ngonyaka wayo wokuqala wabantu abanenqaku lesikweletu le-740 + uma kuqhathaniswa nalabo abangazivezi.
Kodwa-ke, noma ngabe ungakaze ube nesiphambeko akusona inhlamvu yomlingo ngenzalo yemalimboleko ephansi. Othile onomlando wesikweletu we-640-670 ongakaze abonakale ngaphambili noma aveziwe kwakungekho eminyakeni eyisikhombisa edlule wayethola isilinganiso esiphakathi se-5.3%. Lo mehluko we- $ 1400 wenzalo ethe xaxa kumuntu onesikweletu esihle kuphela qhathanisa nothile onesikweletu esikhulu nokusobala.
Uma ufuna ukwenza konke ongakukhetha kufanele ukhulume no Ummeli Wokucekelwa Kwentela eNew York ukudlulela kukho konke ongakhetha kukho. Ummeli uzohlonipha ubumfihlo bakho, aphendule yonke imibuzo yakho, abukeze zonke izinketho zakho eziphathelene nempahla yakho ebanjiswayo, axoxe ngezinketho ezihlobene nobuphi ubunzima obhekene nabo ngaphandle kokugwetshwa. Xhumana nathi namuhla ukuze uhambe ngezinketho zakho ezihlobene nemalimboleko yakho yosizo lwangempela. Lokhu akukubizi mali. Woza komunye wethu Amahhovisi eNew Jersey, noma usishayele ku- (844) 533-3367.